Ngamunye wethu ufuna ukuvula indlu yakho ibe isiqhingi imfudumalo nenduduzo. Ukuze sibhekane nale nkinga, sisiza flooring. Kukhona ezihlukahlukene elikhulu: ukhaphethi, linoleum, parquet, laminate. Kodwa okwamanje yilezi kukakhokho ethandwa kakhulu phansi, izithombe ukuthi ngezinye izikhathi mangaza emcabangweni yethu.
singakuchaza kanjani ukuthi baqala ukusebenzisa kweqiniso "uthando abantu"? It kuvela ukuthi yonke into silula. Floor eyenziwe kukakhokho zemvelo okuhlala isikhathi eside, imvelo, ehlanzekile, has a ukuthungwa enhle, emnandi uma uyithinta. Ngamanye amazwi, namuhla iyona engcono umhlobiso impahla emhlabeni. Ngokuqinisekile, kuyinto kukakhokho flooring ngobuhle nangobubi bawo. Kodwa eziningi izinkundla ukwakhiwa, labo usunolwazi oluhle kakade "inkhulumomphendvulwano" naye, baphikisa ngokuthi enenethiwekhi ayitholakali.
Floor eyenziwe kukakhokho - kuyini?
Imfihlo kokuthola impahla ulula. Cork has twist:-ke "Ukuhlela kabusha" amagxolo. Ngemva kokufinyelela kweminyaka isihlahla 30 kungenzeka ukususa ungqimba phezulu, lapho lesi sitshalo akubangi umonakalo. Ngemva izinto eziba umphumela kuyizipho phansi, aphathwe ngendlela ethile, bese kushiswa esithandweni ekhethekile ocindezelwe ngaphansi kwengcindezi enkulu. ingxube okunjalo olubunjiwe kuyinto air Bubbles futhi kukakhokho phansi isisekelo ukukhiqizwa. uhlangothi lwalo phambi ngokuvamile wakhiwa yokwakha yaseGrisi zemvelo, vinyl noma ukhokho. Ngakho-ke, iqiniso liwukuthi ukhokho flooring ngobuhle nangobubi bawo Yiqiniso, kodwa kusobala ukuthi okwakuvame nakanjani limnandi futhi ukwazi ukwakha design esiyingqayizivele.
Cork flooring e elingaphakathi yesimanje
Cork - izinto kakhulu asetshenziselwa ukwakha igumbi, hhayi kuphela ubulili, kodwa futhi izindonga ophahleni. Okokuqala, it is yaziswa kakhulu ngenxa yokuthi umsindo kakhulu futhi ezishisayo ukwahlukanisa izakhiwo. It akuphazamisi amakhemikhali yasendlini, kahle ubamba iphunga.
Lezi zingcwecwe zokumboza i phansi zokuhlobisa kokuba zemvelo, ophuzi, onsundu, ocher umbala, ngokuvamile esetshenziselwa ingaphakathi. Ungakwazi pick up ithoni ifenisha kanye shades mnyama noma kube lula, imibala engavamile kakhulu avelele ezithakazelisayo. Cork flooring ngobuhle nangobubi bawo okungase kunakwe lapho ebeka ngeke ngokuphelele bheka iliphi igumbi.
Floor eyenziwe kukakhokho - ikhambi ephelele
Uma flooring ezivamile kubonakale kuyisicefe, ungathola njalo lapho ukuthenga kukakhokho flooring ukuthungwa ahlukahlukene ukhuni veneers: oki, uphayini noma yinoma uluphi uhlobo ezingavamile, isibonelo, kanye nephethini "American Walnut", "Rosewood" futhi "Zebrano". Ungakhetha ukubeka fotoparket KaMose noma impahla efana ukuthi kulingisa isihlabathi, amatshe noma amatshe.
Ngakho yini kukakhokho flooring ngobuhle nangobubi bawo? Inzuzo yayo eyinhloko ehlangene impahla.
• Sakhiwo ukungena nakwamanye amazwe - lokho plus enkulu yalesi material. Pore ngamunye nomoya Friend, ngakho ukhokho nezimo ngakho, nokunwebeka futhi engasindi.
• efudumele okunjalo phansi kuya touch, njengoba kancane mba ukushisa aphumayo nomzimba womuntu ezingeke ishiwo zemabula, linoleum kanye nezinye izinto.
• kukakhokho flooring uphelele "cisha" zonke umsindo, ngakho omakhelwane ngeke kusadingeka ukuba sizwe akhononde.
• material okunjalo amelana ukusonteka futhi isifaca ngemva rearrangement ifenisha imilenze abuyiselwe ngokushesha.
• Imvelo abanobungane - yilokho enye inzuzo isiminyaminya. Ngaphezu kwalokho ke ine anti-emisebeni.
• phansi ze-non-ukushelela ezinjalo, kulula amnakekele, akabe buthelela uthuli kuyalithinta isicathulo sabakhubazekile yomgogodla ngesikhathi uhamba.
Yiqiniso, ngokwemvelo azikho izinto ekahle futhi kukakhokho flooring - is iyathinteka.
- Kuyinto ngaphansi isenzo ngokweqile umswakama swellable.
- Material buyimfanelo enamandla abampofu eqine, ngamanye amazwi, esabe we izimpiko ikati nowesifazane "stud".
- Tube anolaka, ngakhoke kudinga ezahlukene enamathela izingoma.
- impahla Qualitative has a eziphezulu, ngisho laminate ngenhla kanye parquet. Kodwa uma uthenga kwasekuqaleni amandla kumele baholwe kuphela imibono yakhe, sicabangisisa ngazo zonke "kochwepheshe" futhi "nebubi."
Yiziphi amaprotheni kangcono kwesisindo: izinhlobo kanye nemithetho yokwemukela